China kuRussia-Suzhou Sohologistics CO., LTD.
Imba>Mutsetse Webasa>Europe yeMediterranean uye Makungwa Matema>China kuRussia
Kuendesa kubva kuChina kuenda kuRussia
Kana iwe uchitsvaga wekuvimbika wekutakura zvinhu kuti ubatsire kutumira kwako kubva kuChina kuenda kuRussia, iwe uri munzvimbo chaiyo.
Kunyangwe basa rekutakura kubva kuChina kuenda kuRussia rakakura kwazvo mazuva ano, SHL inogona kugara ichiedza kuita kuti zvinhu zvigadzikane kushanda zviri nani, kunze kwemhinduro yakanakisa uye nekushandira kwakanaka, tinokwanisawo kupa mitengo yekukwikwidza kubva kuChina kuenda kuRussia.
SHL ichabatsira yako kusarudza yakanyanya nzira yekutumira nzira, yemakwikwi yekutumira mutengo uye yakanakisa yekufambisa makambani kubatsira yako yekuendesa kubva kuChina kuenda kuRussia.
China European Mugwagwa Wekutakura kubva kuChina kuenda kuRussia
Chechina logistics chiteshi pakati peChina neEurope mushure memhepo, gungwa uye njanji yekufambisa. Iri mhiri kwekondinendi yeEurasia kuburikidza neChina horgos chiteshi, Kupfuura Kazakhstan, Russia, Belarus nePoland kuenda kuRussia, nzvimbo yepakati peEurope.
China Railway Express kubva kuChina ichienda kuRussia
SHL inopa yakatsiga njanji sevhisi pakati peChina neRussia yeFCL neLCL zvinhu zvekutakura, One Belt uye One Road projekiti logistics yekumhanyisa uye kutumira kunze zvakagadziriswa mhinduro uye isu tinogona kugadzirisa matambudziko ekubvisa tsika muChina.
Kutakura Mhepo Kutakura kubva kuChina kuenda kuRussia
Kune dzakawanda ndege dzekunze dzepasi rose muRussia uye kunewo zvinhu zvakawanda zvekutakura kubva kuChina kuenda kuRussia nendege, SHL inogona kupa mhepo yemakwikwi yakakura kwazvo iyo yakaderera kupfuura musika kune yedu mutengi zvichienderana nehurongwa hwako hwekuda.
Ro-Ro / Kupwanya Bulk Kutumira kubva kuChina kuenda kuRussia
SHL inogona kupa RORO ROROMAFI BREAKBULK yeiyo chaiyo michina, mota uye zvinorema michina kubva kuChina kuenda kuRussia Tinogona kupa imwe kumira uye kwakaenderana mhinduro.
Kutakura Gungwa Kukutakura kubva kuChina kuenda kuRussia
SHL ine huwandu hwakasimba hwekutumira zvinhu kubva kuChina kuenda kuFelixstowe, Southampton, nezvimwewo kuitira kuti isu tigare tichiwana zvakanaka rwendo rwegungwa kuenda kuRussia port kubva kune vakawanda vanotakura, uye isu tinogona kuona nzvimbo yemidziyo kunyange mumwaka wepamusoro.
Door to Door Service China kuRussia
Pamusuwo wekusuo nesuo, SHL inogona kuita nekukurumidza kumisikidzwa kuRussia uye kuendesa zvinhu zvekutumira kunzvimbo yekuchengetera yevatengi yedu zvakanaka, Kunze kweizvi, kana uri wega, SHL ine kambani yekutengeserana iyo inogona kuva inogadzirisa pane BL uye inokubatsira iwe kutumira kutumira zvinhu zvinobudirira.
China iri chinhambwe chinosvika 7,775 km kubva kuRussia asi kuyambuka chinhambwe ichi kunogona kutora nguva yakareba nekuda kwenzira dzegungwa dzinotsanangurwa nemiviri yemvura.
Asati asarudza iyi nzira yekutumira, iye / iye anofanira kunge achinyatso ziva neakasiyana madoko mairi muChina neRussia.
Main Airport muRussia
Cheboksary Airport Chikson Airport
Mhando dzekutumira kubva kuChina kuenda kuRussia
Pese paunenge uchiunza kubva kuChina kuenda kuRussia, unogona kusarudza nzira zhinji dzekutakura.
Ndeipi chiteshi chandinofanira kushandisa kutumira kubva kuChina kuenda kuRussia?
Nekuti iwe unoda chiteshi chinogona kukubatanidza iwe zvakananga neRussia
Ndeipi nguva yakazara inotorwa kubva kuChina kuenda kuRussia?
Muchidimbu, iwe unogona kukonzera pane izvi zvese kuti uwane nguva yakaringana inotora kubva kuChina kuenda kuRussia
Vakadaro vanotakura mafambiro vanoziva mitemo nemirairo inotungamira kupinza kubva kuChina kuenda kuRussia